ကြက်အာဗင်ကင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ကြက်အာဗင်ကင်	20
Posted by ဇီဇီ on Aug 4, 2016 in Creative Writing, Food, Drink & Recipes, How To.. | 20 comments
မလေးရှားက စားဖိုမှူး ကိုလပြည့် လက်ရာ။
ကြက်သွန်နီ -၂ လုံး၊
ငရုတ်သီးစိမ်း – ၁၅၀ ဂရမ်၊
ပူစီနံ – ၇ ခက်
ပင်စိမ်း – ၁၀ ခက်
ကြက်သွန်ဖြူ – ၂ လုံး
ဂျင်း – တစ်တက်
စပါးလင် – သုံးချောင်း ကိုနုတ်နုတ်စင်းပြီး အကုန်ရောကြိတ်၊
ပြီးရင်ြ၊ကက်ပေါင်ကို ဓားနဲ့သုံးချက်စီမွန်းပြီး ခုနကကြိတ်ထားတဲ့အနှစ်တွေကိုသင့်တင့်ရုံနှယ်ပြီးနှပ်ထား၊
အဲဒါ လုပ်စားကြည့်တော့ ထင်ထားတာထက်ကို အရသာကောင်းလွန်းလို့ လာမျှတာ။
မယ်ခွစ်ရော မွသဲရော လုပ်စားပြီးပါပြီ။
အနှစ်တွေ ကျန်တာနဲ့ ရှိတဲ့ ပုဇွန်တွေရော ပြည်ကြီးငါး အသေးလေးတွေရော ဝက်အူချောင်းတွေကို ရောနယ်ပြီး ထပ်ကင်လိုက်တယ်လေ။
ဂျစ်စူ says: ကြက်ခလေးခမျာ သနားစရာ
မမချွိ says: အေးးး
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12186
Thint Aye Yeik says: လုပ် စားချင်စရာ . . .
ဒါမယ့် လုပ် မစားချင်စရာ.. . .
(မြို့ထဲမှာ ကြက်က အနည်းဆုံး အစိပ်သား ၁၅၀၀ ဖိုး ဝယ်မှ ရလို့။ တစ်ယောက်ထဲ အဆောင်မှာ ချက်စားတာ ကြက်အတွက်ချည်း ၁၅၀၀+တခြား ဗာဟီရတွေ ဝယ်မှာနဲ့ဆို . . . .အမငီးးးးး တစ်ခါ စားရဖို့ကို နည်းမှာမဟုတ်။ အကုန်မခံနိုင်သေးလို့။ လုပ် မစားချင်စရာ. . .)
.ဘော်ဒါတွေနဲ့ စုပြီး အာ့မျိုး လုပ် စားအုန်းမှ။
မမချွိ says: တခြားဗာဟီရ စဉ်းစားမနေနဲ့။
ကြက်ပေါင်လေး ဝယ်ပြီး အဆာပလာ ရှိတဲ့ အိမ်ကို တက်လည်။
အောင် မိုးသူ says: အာဗင်လိုချင်နေတာ။ ကြက်ကင်စားချင်တာ။ ဒီပို့စ်လေး ယူသုံးချင်တယ် မကြီး။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14466
kai says: အမ်.. ဈေးကွက်လုသူပေါ်လာပြီ…
သမင်သား အသားချည်း၂ပေါင်ကျော်ကျော်ရယ် ၀ယ်လာတယ်..။
ကယ်နိုင်သူများ ရှိမလား.. သိချင်ပါ၏..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
မမချွိ says: သမင်သား(Deer Meat) က သေးသေးပါးပါးတုန်းပြီး ဆား/ပဲငံပြာရည် အကြည် နဲ့ နယ်ထားလိုက်။
ဘရိုကိုလီကို သေးသေးစိတ်ပြီး ရေဆေးစစ်ထားး
ကြက်သွန်ဖြူမိတ်ကို ရှည်ရှည်လေးတွေ လှီးပြီး ထားး
ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဂျင်း တစ်ပြားရိုက်ပြီး ဆီသတ်၊ သမင်သားထည့်၊
ကျက်ခါနီးမှ အမြိတ်ထည့်။ ကော်ရည်ထည့်။
အရသာမြည်းး။ (Easiest Way)
သတင်းစာထဲပေးမဲ့ဟာကို သတင်းစာထဲပါပြီးမှပဲ တင်တော့မယ်။
kai says: ဘရိုကိုလီနဲ့ အမဲသားချက်ထားတဲ့ ပုံစံမျိုးပဲ..။
Chinese ဟင်းလားမသိ.. စားဖူးတယ်..။
၀က်သားကို ချဉ်ပေါင်ဝယ်လာသမို့.. အဲဒါနဲ့ ချက်ကြည့်မယ်..။
ဟိုဈေးကွက်လုတဲ့ ကိုရင်လေးက.. ဗီဒီယိုရိုက်မှာထင်ပါတယ်..။
မိမိအနေနဲ့ ပြဿနာတော့.. မရှိပါလို့နော..။ Was this answer helpful?LikeDislike 12402
မမချွိ says: ကဲကဲ။
အယ်ဒီတာ ပတနာမရှိဆိုရင်တော့ သဘောပါခညားး
Was this answer helpful?LikeDislike 12402
မမချွိ says: မိုးသူရေ။
နောက်လ လောက်မှ ယူပါ။
မမဂျီးက စားစရာပို့(စ) က တဂျီး သတင်းစာ အတွက် ရေးတာမို့။
သတင်းစာထဲ ပါပြီးမှ ယူသုံးပေးပါနော်။
အောင် မိုးသူ says: ရတယ်ရတယ် အေးဆေး။
စိန်ကြက်ဆင် says: အိမ်း ဒီပုံတော့ မဆိုးဘူး ….
ဖေ့ဘွတ်မှာ …. မွသဲ တင်ထားတာတော့ …. ကြက်တကောင်လုံး မီးလောင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ 😩😁
မမချွိ says: အေးဆို။
နာက လက်လွန်ပြီး ထားအူးမလို့အေ။
ကံကောင်းလို့။ အချိန်ပြည့်ပဲ ကောင်းပါတယ်ဆို ထုတ်လိုက်တာ။
Foolish Girl says: အာဗင်ရှိဝူး တစ်ခါဘာနည်းရှိသလဲဟင်
မမချွိ says: အမလည်း မရှိဘူးး
အိုးထူကြီးကြီးရှိရင်ရေထည့် အပေါ်က စကာတင်ပြီး ကြက်သားကို တင်လိုက် ပြီးဖုံးပြီး တည် လည်းရတယ်တဲ့။
မရှိရင် Aluminium Foil ခံပြီး မီးဖိုမှာ ကင်လိုက်။ Grill လုပ်လိုက် ရတယ် အရေခွံ
Foolish Girl says: ဟုတ်ကဲ့ပါ
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3716
လုံမလေးမွန်မွန် says: အမြင်က ပတ်တနာ မချိပါဘူး.. စားကောင်းတယ်ဆိုရင် ပြီးတာပဲ..
စမ်းသပ်တာ ကောင်းတယ်ဆိုရင် အတည်လုပ်ကျွေးတော့နော်.. တီသဲ.. အဟိ
black chaw says: အရက်သောက်ရင်း ၀င်ဖတ်သွားတယ်ဗျာ…။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1848
nozomi says: အဲဒီ အဆာပလာတွေရယ်
ချက်တတ်တဲ့ ငယ်ငယ်ချောချော ခေး တယောက်ရယ်
ရ ရင်တော့ လိုချင်မိတယ်
မမချွိ says: ခေး ငယ်ငယ်ချောချောက ဘယ်ကပါလာတာတုန်း